अप्पर तामाकोसीको सेयर संकलन अवधि सार्न स्थानीयको आग्रह - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
अप्पर तामाकोसीको सेयर संकलन अवधि सार्न स्थानीयको आग्रह
असार १९, २०७५ 3071 सागर केसी/दोलखा
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना प्रभावितका लागि सेयर संकलनको अवधि पर सार्न वा बढाउन स्थानीय तथा जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् । मध्य बर्खा सुरु भएको र स्थानीय रोपाइँमा लाग्नुपर्ने हुँदा अवधि बढाउन माग गरिएको हो ।
अप्पर तामाकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीले स्थानीयका लागि दोस्रो पटक सेयर निष्कासन गर्न लागेकाे छ । यही असार २४ गतेदेखि साउन ९ गतेसम्म सेयर खरिद गर्न आवेदन दिने समय तोकिएको छ । तर, स्थानीयबासी तथा जनप्रतिनिधिले यो मिति साउन १६ गतेदेखि भदौ १४ गतेसम्म कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
दोलखा जिल्ला समन्वय समिति चरिकोटमा सोमबार जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहितको बैठकले सेयर संकलनको मिति पर सार्न माग गरेका हुन् । बैतेश्वर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रविचन्द्र आचार्यले असार मसान्तमा आर्थिक वर्षको हिसाब मिलान गर्नुपर्ने हुँदा समय सार्न आग्रह गरिएको बताए ।
‘वर्षाको बेला भएकाले किसानहरू असारे खेतीमा व्यस्त हुन्छन्, यसो हुँदा सबैले सेयर खरिद गर्न आवेदन दिन भ्याउँदैनन्,’ उनले भने, ‘सबैलाई मिल्ने समय कायम गरे समस्या हुँदैन ।’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले यसबारे आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
सेयर खरिदमा बढी सहभागीता जनाउन काठमाडौंमा पनि संकलन केन्द्र व्यवस्था, परिवारको एकै व्यक्तिको खाताबाट सबै सेयर किन्नेलगायत व्यवस्था गर्न पनि स्थानीयले माग गरेका छन् । धितोपत्र ऐन, २०७३ मा धितोपत्र खरिद बिक्रीलाई सरल र व्यवस्थित गर्न सि–आस्वा प्रणाली लागू गरिएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि, दलका नेताकै दबाबमा लाइन बसेर लगानी गर्नुपर्ने पुरानो प्रणालीको माग पनि गरिएको छ । यसबाट लगानीकर्ताले पछि किनबेच गर्दा समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
‘जनप्रतिनिधिको माग सकारात्मक नै छ, बोर्डको स्वीकृत पाएको २ महिनाभित्र सेयर संकलन सुरु गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यही समयभित्र भए छलफल गर्न सकिन्छ ।’ कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्न गत जेठ २३ गते बोर्डबाट स्वीकृत पाएको थियो । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटलले पाएका छन् ।
मिति सार्नुभन्दा समय थप्नु उचित
आयोजनाका लागि सेयर संकलनको मिति सार्नुभन्दा समय थप्नु उचित हुने सेयर विश्लेशकहरूले धारणा छ । पटक–पटक मिति तोकेर मिति सार्दा अन्यौल हुने हुँदा अवधि थप गर्न सकिने धारणा राखेका हुन् ।
सेयर खरिद तथा संकलनको समय साउनभरि वा भदौ १४ सम्म पुर्याउन सकिने अवस्था रहेको बताइएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बोर्डलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरेर उचित निर्णय लिइने बताए । धितोपत्र ऐन, २०७३ अनुसार सेयर आवेदन संकलनका लागि ३५ दिनसम्म म्याद राख्न पाउने हुँदा दोलखाबासीका लागि पनि उक्त अवधि कायम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।